China bọl bọl bọl bọl na ndị nrụpụta | Kingtai
Ọfụfụ basketball ọhụrụ adịla ugbu a na ụlọ ọrụ nrụpụta ụkwụ anyị square 50,000. Kpoo slam dunk nwere oke mma, onyinye basketball basketball sitere na Kingtai! Họrọ site na bọọlụ basketball dị iche iche, ha niile nwere ihe osise a na - akwụghị ụgwọ. Ngwurugwu basketball ndị a mara mma ma dị ọnụ ala zuru oke maka ịsọpụrụ ndị otu gị maka oge ọgụ siri ike ma ọ bụ ịmata mmezu ndị pụrụ iche nke ndị egwuregwu gị.
Nhọrọ anyị na ịnye ọnụahịa na BASKETBALL Medals niile na-eme ndị a SLAM DUNK! Nwee ntụkwasị obi agbakwunyere na ị na-emeso onye nrụpụta a ma ama aha ya na ọtụtụ puku ndị ahịa afọ ojuju! Zụọ nnukwu nhọrọ anyị bọọlụ Nkata na nkata basketball dị n'okpuru. Họrọ gị nrite n'okpuru ma echefula ịlele nnukwu onyinye nrite basketball buru ibu edepụtara n'okpuru foto medal ahụ! Anyị na-ebukwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ pụrụ iche na ihe egwuregwu Bọọlụ Nkata na Trophies.
Bọọlụ basketball dị mma, akara nrite na onyinye omenala dị maka mbufe ọ bụla nọ na USA! A na-arara EDCO maka ịhọpụta nhọrọ kacha mma nke trophies basketball maka nkwanye na mkpali nke ndị egwuregwu, ndị nkuzi na ndị ọrụ afọ ofufo. Anyị anya-akụta aghụghọ na-emepụta si kasị mma ihe na-anapụta na àgwà mgbe anọ na mmefu ego! Zụọ ahịa ugbu a ma nweta ọrụ ndị ahịa ụwa, nnyefe ọsọ ọsọ na ịchekwa ego na usoro ọ bụla.
Nke gara aga: EGO
Osote: EGO NA-EGO